पर्वतकी १७ बर्षिया मेनुका श्रेष्ठ कालीगण्डकीमा मृत फेला ! – ebaglung.com
पर्वतकी १७ बर्षिया मेनुका श्रेष्ठ कालीगण्डकीमा मृत फेला !
२०७५ मंसिर २२, शनिबार ११:४१	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ मंसिर २२ । १३ दिन अघि घरबाट बेपत्ता भएकी गुल्मीको पुर्तिघाट स्थित जीवन उद्धार माध्यमिक विद्यालयकी विद्याथी १७ बर्षिया मेनुका श्रेष्ठ कालीगण्डकी नदीको मिर्मी ड्याम्ममा मृत फेला परेकी छन ।
पर्वतको बिहादी गाउँपालिका वडा नम्वर ३ रानीपानीकी श्रेष्ठ मंसिर ९ गते देखि घरबाट बेपत्ता भएकी थिईन । श्रेष्ठको मिर्मी ड्याममा सडेगलेको अवस्थामा शव फेला परेको सो वडाका वडाध्यक्ष रणबहादुर ओलीले जानकारी दिए ।
मिर्मीमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका रतन कुँवरले शुक्रवार उनको शव देखे पछि प्रंहरीलाई खवर गरेका थिए । पारिवारिक श्रोतका अनुसार त्यस दिन बेपत्ता हुनु अघि श्रेष्ठले बाबु संग केहि काम देखाउँदै केहि रकम मागेकी थिईन ।
बाबुले पैसा नदिए पछि उनी रिसले चुर हुँदै घरबाट हिडेकी थिईन । त्यसैको झोकमा कालीगण्डकी नदीमा हामफालेको हुन सक्ने अनुमान स्थानियले गरेका छन । उनी त्यस विद्यालयको कक्षा ११ की विद्यार्थी थिईन ।
शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सवमा रु १ करोड ९० लाख बढी रकम संकलन ! महोत्सव पूर्ण रुपमा सफल -नेपाली : महोत्सव सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद – अर्याल
५ बर्षिया बालिका सामुहिक बलात्कारको शिकार, अभियोगी पक्राउ !